Ngokuqhelekileyo kuninzi, uya kufumana abalobi, abathengisi beentlalo, kunye ne-digital gurus, bachithe iiyure bazama ukwenza i-tweet e mfutshane, enomthi, kwaye ngokuthe ngqo ukuya kwinqanabeekeeee ekahene kesahnenekee kashenenekee kahenenekee kayenenekee kashenehayekae keae.
Ukuba ne-Twitter bio enhle ingabonakali ibalulekile, kodwa yile nto: I-Twitter bio ingaba esinye sezizathu zokukhuthaza abantu ukuba bakulandele – svojegokuba kunjalo okanye kungenjalo, ukuba ne-Twitter bio echaphazelekayo ibaluleke kakhulu.
Ukuze kukunike ingcamango yendlela omele uyenze ngayo i-Twitter bio yakho, siye saqulunqa ezinye zezilwanyana ezinobulumko kakhulu esinokuzifumana kwiTwittersphere. Hlola ezi bios ezibhalwe kakuhle kwaye uthemba, uya kuphefumlelwa ukuba ubhale enye njenogabo!
1.1 Майк Дейвидсън
1.3 Кандис Уолш
1.4 Кейти Кендъл
1.9 Уил Арнет
1.11 Алисън Лейби
1.12 Алиса Уолф
1.14 Деймън Линделоф
1.16 Централна комедия
1.17 Тайлър Кларк
1.18 Джони Кекс
1.21 Тайната кукаВиктория
1.22 Елън Деженерес
1.23 Том Хенкс
1.25 Старата подправка
1.26 Мелиса Грифин
1.29 Макс Седън
1.30 Джейсън Фолс
1.31 Кат Чоу
I-Twitter bio ingaba yithuba elikhulu lokunika i-reume emfutshane okanye iziqulatho zaho zomsebenzi kunye noMike Davidson, owayengumntu we-VP we-Design kwi-Twitter, uyazi indlela yokwandisa indawo encinane.
Ukuba ufuna ukumba ngeengcebiso apha Webhostingsecretrevealed, ngoko ke unobungqina bokuthi ungumntu ozikhukhulayo. Kwaye kwi-Twitterverse, ukuba yi-geek yinto yokuziqhayisa, hergoCarrie Brown wenza nge-Twitter bio.
UBrown uyaziqhenya ngokuzibiza ecaleni lakhe elincinci ngokuzibiza ngokuba yi "Общо компютърни маниаци", kwaye "Utshatile kwikhompyuter" ngelixa ephakamisa "iikhompyutheni ezimbini zekhomputha zekamva".
Ewe, wayenako ukufaka umsebenzi wakhe wosuku njengomNxibelelanisi woNxibelelwano we-Women Film Film Fest, kunye ne-Twitter yokuphatha.
Uthotho luyakongeza ubuntu kwi-bio yakho ye-Twitter kunye nomlobi wesithandathu Ukusetyenziswa kweetekisi ukusetyenziswa kwehlazo lokuzihlambalaza ngumzekelo obalaseleyo wokongeza ezinye izinto ezihzakakikuokuikukekuko.
Ngaba wayesazi ukuba i-llamas inokuthi ihlupheke kwi-Berserk lalama syndrome, imeko apho i-llama ikholelwa ukuba umnini vinentu nayo i-llama, ebangela ukuba babe nobudlova?
Awufanele aphelelwe ngumhlobo wakhe omhle, uJason Bateman wachaza uArnnett kwi-Twitter bio ngokubhala ukuba "ungumhlobo ние-Уил Арнет".
Ngokufanayo noBateman no-Arnett, umbhali kunye nomculi u-Alison Leiby udlala ubuhlobo bakhe obusondeleyo kunye nomculi u-Alyssa Wolff kwi-Twitter bio.
I-Twitter yeTime Siedell yiyo yonke в esinethemba lokuba sikwazi ukuyenza, okukuphela nje ukuyeka yonke в kwaye siphile ubomi bethu njegobungqina obuhle (okanye obuhle). Ngelishwa, ininzi yethu ayikho ibhiliyoni kunye / okanye ihle.
Kwimiphakathi yanamhlanje, "ingxaki yokuqala yehlabathi" iyakhathazeka rhoqo kwaye le akhawunti ye-Twitter iyonwaba kuzo zonke izinto ezincinci abantu abavame ukukhalaza ngazo: ukhetha ukuba yiyiphi ifilimu ukurenta, ukulalisa ukusela okungalunganga, okanye ukubhala.
Ukubhala i-Twitter bio inokuba yintlungu (intlungu yokuqala yehlabathi ukuba uya kuthanda), kwaye kunokuba ubhaqe iintloko zabo bezama ukubhala indlela yokubhala ngokwenene, i-bio ngokweneaa, bahamba nunkumenea, bahamba nhakumene, bahambaku bahabaku.
UJohnny Cupcakes ngumntu oqhelekileyo weBoston-базирана марка, а не хлебопекарна за кекс, naphezu kwegama. Ngamagama afana noJohnny Cupcake, unokulindela ukuba i-akhawunti yabo ye-Twitter igcwaliswe ngee-tcky tweets ezibhekiselele kwisambatho nesitayela.
Nangona i-Skittles yinqaku elikhulu, bakwazi ukubeka ubuntu obuncinane ekubhaliseni kbobo okuhambelana nomfanekiso wabo oqaqambileyo nombala.
Ngokuqinisekileyo, uninzi kunoko. Kunoko, uMusk okwangoku usebenza kwiprojekthi entsha eyenza i-тунели eziphakamileyo kwiidolophu ezisemadolobheni kunye nenjongo yeprojekthi ukuthengisa izitya ukuzisa abantu. Yindlela efanelekileyo yokuthengisa iprojekti yakhe ngelixa ehlekisa.
Imfihlo kaVictoria iyabazi ukuba bangoobani kwaye yintoni abaphulaphuli babo abalindele kubo. Kungenxa yeso sizathu i-bio yabo ithi yindawo apho "iiNgelosi, iiBombshells kunye nabalandeli abathandanayo ngesondo" banokufumana yonke idosi yabo yemihla ngemihla yesini kwinkampani ye-бельо.
Enoba ithelevishini, ubomi bokwenene, okanye imidiya yoluntu, u-Ellen DeGeneres uyhhlekisa. Ngoko unokulindela ukuba i-Twitter bio ibe yinto ehlekisayo kunye ehlekisayo. Kubonakala ukuba, ngaphandle kokuba ngumculi kunye nomninimzi we-Ellen Show, naye uyenzeka ukuba ngumqhubi wendlela yeqhwa.
Akunjalo ukuba oko kuyinyani okanye akunjalo, в enye inokuqinisekileyo, i-tweets zakhe zinyani kwaye ziyamangalisa ngokwenene.
UTom Hanks ngokuqinisekileyo ungumdlali ние "всеки мъж". Esikhundleni sokuzibhalela i-Twitter bio ekhazimulayo, uHanks unyaniseka ngokuqinisekileyo ukuba ngamanye amaxesha unesimo esihle kwaye ngamanye amaxesha akayena.
Enoba unesimo esihle okanye awukho, sisamthanda uTom Hanks njengomnye wabadlali abalungileyo wasxa zonke kunye nokuba neakhawunti enhle ye-Twitter.
Abantu badla ngokubhala ngeengcamango zabo ngolu hlobo lwecandelo, ‘в enokuba yinto edidayo. Wayeka yonke в ngokufaka intlanzi efanelekileyo kwi-bio yayo: "Akunjalo, ulungile?". Okuqinisekileyo kuya kuvala abagxekayo!
I-bio ayifanele ibe yinkcazelo ebanzi kakhulu. Ngamanye amaxesha, yonke into oyifunayo yimiyalezo engundoqo yokunika abantu ingcamango yento oyiyo yonke в kunye ne-Old Spice, konke "NGEMISEBENZI, AMAKHAYA, AMAKHASI, AMAKHONO, IZIFUNDO".
Ukuba awukwazi ukuthatha ingqwalasela yabaphulaphuli kumgca wokuqala we-bio yakho, ngoko awukwenzi okulungileyo. I-Twitter био kaMelyssa Griffin ngumzekelo omhle wendlela umgca wokuqala kwi-bio yakho ungasetyenziselwa ukuthatha ingqwalasela yabantu.
ULatka uyazifaka ngokubaluleka kwimicimbi ebalulekileyo yomsebenzi wakhe (i-CEO yeTheTopInbox.com kunye ne-podcast kunye ne-4,5 милиона сваляния).
Umlobi weendaba kunye noBufffeed кореспондент uwonke uMax Seddon uyazi ukuba ihlazo liyingxenye ebalulekileyo ye-Twitter bio. Ukuhlonipha kukaSeddon ukudibanisa uYakov Smirnoff wenza umsebenzi omkhulu wokongezelela umsebenzi wakhe njengomnyathelisi waseRussia, ngelixa echaza ingozi ezayo nayo.
Ukuba "uyihlo, umbhali, isithethi", u-Falls ubhala yakhe njegokuba kungabikho nxu lumano lokuba nguyena umntu ngaphandle kwakhe. Yilo hlobo lwesimo sengqondo esiphantsi komlaba esenza i-Twitter bio ekhethekileyo.